Nyanzela ukuyeka iZicelo kwiMacOS Sierra | Ndisuka mac
Ngaphandle kwento yokuba inkqubo yeekhompyuter ye-apile izinzile, izinzile kakhulu, zihlala zihlala zikhona iimeko ezibangela ukuba ixhomeke okanye ukuba esinye sezicelo esizenzayo siyeke ukusebenza.
Ngale nto sifuna ukuyenza icace ukuba elininzi lamaxesha, ukuba inkqubo ye IMac Ayenzeki ngenxa yokuba inkqubo iyekile ukusebenza, kodwa ngenxa yokuba isicelo somntu wesithathu sesinye esingasebenzi kakuhle Kwaye ke isicelo sangoku sesona siphazamisayo kwaye asisivumeli ukuba senze nantoni na ngekhompyuter de siphume kuyo.
Xa ezi zinto zisenzeka into ekufuneka siyenzile kukunyanzela ukuphuma kweso sicelo sisebenza ngokungaqhelekanga kwaye le Apple ngokwayo ilungiselele indawo apho singalawula ukuvalwa ngaloo ndlela, oko kukuthi, UKUQINISA.
Ukwenza oku, kufuneka siye kwi  imenyu kwaye ucofe kwimenyu ehlayo ebonakalayo kuMandla phuma ... uya kubona ukuba iwindow pop-up ivula ibonisa usetyenziso olusebenzayo kwaye Zeziphi ziyeke ukuphendula ukuze ukhethe into ocinga ukuba ifanelekile kwaye uyivale.
Ewe, kweli nqaku into esifuna ukukuxelela yona kukuba iinjineli zesoftware ka-Apple zihlala zisiya phambili kwaye le nyathelo ikhona enye indlela efihliweyo esigcina ngayo iwindow pop-up apho ukukhangela usetyenziso oluyekileyo ukusebenza ukuvala.
Ukuba ngaphambi kokucinezela kwi  imenyu, Cinezela iqhosha le-SHIFT, siza kubona ukuba kwimenyu ye-instead endaweni yokubonisa ukuphuma kweMikhosi ..., okubonakalayo kukunyanzelwa kokuphuma kwesicelo esingaphambili. Ukuba le nto uyivulileyo liLizwi kwaye iyekile ukusebenza, xa usenza le ndiyibonisileyo, into oza kuyibona kwi-drop-down yi-Force Word ukuphuma.
Ayisiyondlela eyahlukileyo yokunyanzela ukuphuma kwezicelo kodwa kule meko uthathela ingqalelo into yokuba uza kunyanzela ukuba uvale sisicelo esingaphambili sokusetyenziswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » Mac Sierra » Nyanzela ukuyeka iZicelo kwiMacOS Sierra
UJony Ive ufuna ukuyila isixhobo sesepha